ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: April 2012
ကိုအောင်ကြီးရဲ့ မွေးနေ့အလှူ (၂၉.၀၄.၂၀၁၂)
ကိုအောင်အောင် + မစိမ့်စိမ့်လှိုင် (သား) မောင်သုတအောင် မိသားစု ရဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာ ကုသိုလ်အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် အရုဏ်မုန့်ဟင်းခါးဆွမ်းနဲ့ အချိုပွဲတို့ကို မွန်မွန်မြတ်ပဲ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး၊ ဧည့်ပရိသတ်များကိုလည်း တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ ချမ်းမြေ့မြိုင် ဓမ္မရိပ်သာမှ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒက ဂျာမဏီသို့ ကြွရောက်တဲ့ နေ့နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် အလှူရှင် မိသားစုများနှင့်တကွ ဧည့်ပရိသတ် များ၊ အသင်းသူ၊ အသင်းသားများ ပီတိ ပါမောဇ္ဇ ဖြစ်ကြရပါတယ်။
နေ့ဆွမ်းကိုလည်း လစဉ် (၁၂) ရက်နေ့နဲ့ (၂၉) ရက်နေ့တိုင်း ဆက်ကပ်နေကြတဲ့ ကိုစိုးဝင်းသန်း + မတင်တင်ဝင်း (သမီး) စုစု (သား) ကိုကို မိသားစုမှ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာတော်သည် ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြု ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ တပည့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံသား၊ ဂျာမဏီလူမျိုး Mr Alic ရဲ့ နုရင်ဘက်မြို့တွင် တရား ဓမ္မ ပြသပေးတော်မူပါရန် ပင့်လျှောက်ထား မှုကြောင့် ပထမဆုံး အကြိမ် ဥရောပသို့ ကြွရောက်တော်မူလာခြင်း လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ ဆွမ်းနဲ့ အချိုပွဲများ ဘုဉ်းပေးသုံးဆောင် ပြီးနောက် ဆရာတော်ဘုရားထံမှ အလှူရှင်များနဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များက သီလခံယူကြပြီး တရားဓမ္မများကို နာယူခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့ကို ဝေနေယျ သတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့အား ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့ ကြပါတယ်။
မွေးနေ့ရှင်မိသားစုနှင့်တကွ ဧည့်ပရိသတ်များ အားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ၊ လိုအင်ဆန္ဒများလည်း ပြည့်ဝကြပါစေ။
ကိုအောင်အောင် + မစိမ့်စိမ့်လှိုင် (သား) မောင်သုတအောင် မိသားစု
ညီညွတ်ခြင်း နှင်းဆီအငြိမ့် လက်မှတ် စတင်ရောင်းချပြီ
ညီညွတ်ခြင်း နှင်းဆီအငြိမ့် လက်မှတ်များကို အောက်ဖေါ်ပြပါ မိတ်ဆွေများထံတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါသည်။
(၁) ကိုသိန်းယု (၀၆၉ ၂၄၀၀ ၄၇၀၁)
(၂) ကိုမောင်မောင်ဝင်း (၀၆၉ ၄၃၀ ၅၄ ၈၄၉)
(၃) ကိုလှမောင်သန်း (၀၆၉ ၁၅၀ ၄၉ ၉၀၂)
(၄) ကိုဦး (၀၆၉ ၂၀၀ ၁၃ ၁၀၄)
(၅) ဒေါ်နွယ် (၀၆၉ ၂၀၀ ၁၇ ၆၇၄)
(၆) မစင်သီ (၀၆၉ ၄၀၃ ၂၉ ၅၇၃)
(၇) ကိုမင်ီးစိန်လင်း (၀၁၅၂ ၂၇၀ ၅၀၆ ၉၀)
(၈) ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းတိုက် (၀၆၉ ၅၆၉၉ ၃၆၃၃) တို့တွင် ဆက်သွယ် ဝယ်ယူနိုင် ပါသည်။
မိသားစု လက်မှတ် (၄၀) ယူရို၊
တစ်ဦးချင်း လက်မှတ်(၂၅) ယူရို နှင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိလာသော အကျိုးအမြတ် အားလုံးသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း၏ ရံပုံငွေ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ ဝယ်ယူမှုသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လည်း ထောက်ပံ့ရာ ရောက်ပါသည်။
မိတ်ဆွေများအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြည်နူး နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ပွဲတော်
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းမိသားစုများ စုပေါင်း၍ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ပွဲတော်ကို ဖော်ပြပါ အစီအစဉ် အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက် ချီးမြှင့်ကြပါရန် အသင်းအမှုဆောင်များမှ ခင်မင်သော စိတ်ထားဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ပွဲတော်သို့ ကြွရောက်လာကြမည့် ဧည့်ပရိသတ်များအား
မမြစမ်းအေး မှ ဖျာပုံ မုန့်ဟင်းခါး၊ အကြော်စုံတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊
မခင်သန်းနွယ် (မနွယ်) မှ ရှမ်းထမင်းချဉ်သုပ်ဖြင့်လည်းကောင်း တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေး လှူဒါန်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျင်းပမည့်နေ့ရက်။ ။ ၀၆. ၀၅. ၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့)
ကျင်းပမည့်အချိန် ။ ။ နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီမှ ညနေ (၀၆း၀၀) အထိ
ကျင်းပမည်နေရာ ။ ။ SAALBAU GRIESHEIM
၂၀၁၂ သင်္ကြန်ပွဲတော် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ အပိုင်း(၂)
အမက ဆို၊ ညီမက က
မိစံ တကယ် ဟဲပြီ
ဒါလည်း ဝါသနာ ရှင်ပါ
အန်တီ ဒေါ်နီနီထူး ဒီတခါ တကယ် ဟစ်ပြီ
သူက အသံဝင်နေလို့ တဲ့